Nguyiphi i-generator engundoqo yegama le-Amazon endimele ukuba ndiyenze ukulungiswa kwam uluhlu lwamveliso?
Ngaphambi kokuba siqhubeke ngokukhetha i-generator yegama elingundoqo le-Amazon ukuze ulungiselele uluhlu lwemveliso yakho ngendlela engcono, siqale ngokufunda okufutshane. Okokuqala, makhe sijongane nayo - ukuba ufuna ukubeka uluhlu olusesikweni kwimveliso ye-Amazon, kufuneka uguqule iphepha lakho lomkhiqizo libe yinto ekhangayo ngakumbi, okuyi-A9 yokutshintsha i-algorithm. Ngoko, injini enkulu yokukhangela i-Google ne-Amazon isebenzisa imilinganiselo eyahlukeneyo ukuze kuqinisekiswe ukuba isiphumo esithile sosesho sifanelekileyo. Nantsi indlela esebenza ngayo nganye:
1 - vision guard plus solgar precio. I-Amazon isebenzisa ukuguqulwa ukucacisa ukuba iindwendwe zekhasi lakho lemveliso ziguqukela njani kubathengi bokwenene abahlawulayo.
2. I-Google ibheja ngokukodwa kwixesha eliqhelekileyo ngokutyelela umsebenzisi, idibaniswe nesilinganiselo sokuchithwa-rate-rate-rate rate.
Ngokuqwalasela ukungafani okukhankanywe ngasentla, lixesha lokuba liphumelele ngegama lakho eliphambili elijoliswe kuyo. Kwaye ngaphantsi ndiza kukubonisa isibini esincomekayo se-Amazon keyword generator tools ukwenzela ukuba uluhlu lwakho lwemveliso lube lulungiswe kakuhle. Ekugqibeleni, ukuba uzibonele phakathi kweziphumo zophando ezichaphazelekayo ngaphezulu kweendawo zokuthengisa. Ukuze usebenze ngokwenene ngegama lakho eliphambili elijoliswe kuyo, qwalasela oku kulandelayo kunye neengcebiso ezifanelekileyo:
1. Cinga ngaphandle kwebhokisi. Ndiyathetha ukuba unokufumana igama elingundoqo elinganako okanye inhlanganisela yokukhangela yomkhiqizo omude - yonke indlela i-shopper ephilayo ingafuna le mveliso ekuthengisweni.
2. Ungalokothi unganqikaze ukuzama i-thesaurus ukufumana ezinye izivumelaniso okanye ukufunyanwa kwe-LSI zokutshintshwa mhlawumbi ezisetyenziswa ngabasebenzisi bokuthenga kwi-Amazon.
3. Hlahla ngokubanzi usebenzisa i-Amazon yegama elingundoqo le-generator kunye nezixhobo zokucebisa, njenge-MerchantWords okanye umhloli wegama elingundoqo-kwaye uyenziwe.
Le jenerethi yegama elingundoqo kunye ne-platform yophando inokukunceda ukuba uhlakulele imigaqo emininzi yokukhangela imveliso emide.Ekugqibeleni, ukwandisa intengiso yakho yonke inetha. I-MerchantWords ibheja ngokubanzi kwisiseko sayo segama elingundoqo legama elingundoqo elingaphezulu kwezigidi ezili-170 zegama elingundoqo kunye neenkcukacha eziphezulu eziphambili ezisetyenziswe ngabathengi abaphilayo befuna iimveliso ezithengiswayo.
Yintoni enye - ithuluzi le-generator yegama elingundoqo (i-platform ye-intanethi, ukuba ichaneke ngakumbi) ingaba isisombululo esihle, ngokukodwa kubadayisi abasemagunyeni abangaqhelekanga kwi-Search I-Engine Optimization (SEO).
I-keywordInspector yiyona nto inkulu kakhulu ye-Amazon engundoqo ye-generator tool ekwazi ukukunika iingcebiso ezibonakalayo ezibalulekileyo ukuze uhlale ukhuphisana, nokuba phantsi kolokhuphiswano olunzima lweemarike. Into embi kuphela ngale nqonga ye-intanethi kukuba imali yayo yenyanga nganye malunga ne-40 bucks ingaba yindleko ephezulu kakhulu kubashishini abaselula abathengisa kwi-Amazon. Nangona kunjalo, ndikholelwa ukuba esi sixhobo sifanelekile ukuzama phantsi kweyiphi na imeko. Ngokuyinhloko ngenxa yeyona ndlela inokubaluleka kakhulu yokhetho olukhethiweyo lwegama elingundoqo, elinokukunceda uhlale uhlaziywa ngokutshekisha yonke inhlanganisela yegama eliphambili kwiiveki okanye kwimihla ngemihla.